T Shirt, Polo Shirt, Hoodie, Sweatshirt - ROTE
kubva pazano kusvika kumagumo ekupedzisira
Kana wagamuchira kubvunza kwevatengi, timu yedu yekutengesa inovanyorera mukati me1 awa kuti tione zvese uye nekupa akakodzera mazano
Dhizaini Uye Kuvandudza Kwechigadzirwa
Yedu dhizaini timu inoita kuseka-kumusoro sekukumbira kwako uye kukutumira iwe yekupedzisira mifananidzo yekufarirwa kwako. Dhizaini iyo mushure mekubvumidzwa inotumirwa mukugadzirwa.
Kugamuchirwa kwemuenzaniso wekutanga-kugadzirwa zvinoenderana nezviratidzo uye zvakatemwa zveyakagamuchirwa tekinoroji, ine machira anowanikwa uye mavara, pamwe neLAB DIPI yemuvara yekutenderwa
Kugadzirwa kweMisa & Kuwedzeredza Hunhu Kudzora
Kana kugadzirwa kwemazhinji kuri kutanga, timu yedu yekutarisisa-mhando ino tarisa zvakananga kuita kwese kwekugadzira kuchengetedza zvigadzirwa zvakapera zviri izvo zvakafanana neyakagamuchirwa pre-kugadzirwa sampuro.
Yakavimbika Supply Chain
Semunhu ane makore makumi maviri ane ruzivo mugadziri, isu takave neyakapedzisa cheni yekugovera, kubva pane zvakasvibirira kuenda kune zvakasiyana siyana, senge shinda, kudhinda, machira, chitaridzi, hangtag, nezvimwe. Isu tinosarudza yakanyanya kunaka mbishi zvinhu uye tekinoroji zvichienderana nerudzi yehembe kana yehembe inogadzirwa.
Unyanzvi, Kugadzirisa uye Kugadzira
Hazvina mhosva kuti nguvo inofanira kuvandudzwa kana kushuvira kuita. Isu tine timu uye ruzivo rwakakosha kuti tiite ese marudzi emapurojekiti. Tine yedu mitatu yekugadzira tambo yehembe, t-shirt, hoody & bhachi Dzinenge mazana matatu emazana emazana emhedzisiro
Kuzvipira Kune Hunhu
Isu tinochengetedza kuzvipira kunogara kuripo kuburikidza nekaviri cheki pazvipfeko usati waendesa kumutengi.
Zvinorevei kuti OEM / ODM mune zvipfeko ma ...
Inodziya Nguva Yechando Zvigadzirwa muLotte Garm ...
Jiangxi Lotte Hanzu Co, Ltd.
Jiangxi LOTTE Nguo fekitori yakavambwa muna 1997, yaive muNanchang, Jiangxi, rinova iro guta guru rezvipfeko zveChinese. LOTTE Nguo inyanzvi yekugadzira zvipfeko iyo inopa OEM & ODM sevhisi, kubva pakutenga shinda, yakarukwa jira, kucheka, kusona kune zvakapedza zvigadzirwa, uye yakapa zvipfeko zvekupfeka, kugadzira machira uye mepu sevhisi.
Iyo fekitori ine ina huru yekugadzira mutsara, yekutanga ndeye T Shirt / nhabvu juzi / tangi yepamusoro, yechipiri ndeye polo shati, yechitatu ndeye jekete / sweatshirt / hoody / bhurugwa, iyo yekupedzisira ndeyekurara kupfeka / pijama. Dzinenge nguvo dzose dzakarukwa dzinogona kuitwa.